ကမ္ဘာ ဦး 47 (သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835)); Arcana Coelestia (Elliott translation) # 6069České uživatelské rozhraní
သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835)ကမ္ဘာ ဦး
ကမ္ဘာ ဦး 47
1 ထိုစကားအတိုင်း ယောသပ်သည်ယောသပ်သည် ဖါရောမင်း ထံသို့သွား၍၊ ကျွန်တော်အဘနှင့်အစ်ကိုအစ်ကိုတို့သည် သိုးသိုးနွားနွား၊ ဥစ္စရှိသမျှကို ဆောင်လျက် ခါနာန်ခါနာန်ပြည်ပြည်ကရောက်လာလာ၍၊ ဂေါရှင်ဂေါရှင်ပြည်ပြည်၌ရှိကြပါသည်ဟု လျှောက်သဖြင့်၊
2 အစ်ကိုအစ်ကိုစုထဲက ရွေး၍ ငါးငါးယောက်တို့ကို အထံ တော်သို့သွင်းလေ၏။
3 ဖာရောဖာရောမင်းကလည်း၊ သင်တို့သည် အဘယ်သို့ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြသနည်းဟုမေးလျှင်၊ သူတို့က၊ ကိုယ်တော် ကျွန်ကျွန်တို့သည် ဘိုးဘေးနှင့်တကွ သိုးသိုးထိန်း ဖြစ်ကြပါ၏ဟူ၍၎င်း၊
4 ခါနာန်ခါနာန်ပြည်ပြည်၌ အလွန်အစာခေါင်းပါး၍ သိုးသိုးနွား ကျက်စားရာမရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်ကျွန်တို့သည် ပြည်ပြည်တော်၌ တည်းခိုခြင်းငှါ လာလာကြပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကျွန်ကျွန်တို့သည် ဂေါရှင်ဂေါရှင်ပြည်ပြည်၌ နေနေရမည် အကြောင်း အခွင့်ပေးတော်မူပါဟူ၍၎င်း လျှောက်ကြ၏။
5 ဖါရောမင်းကလည်း၊ သင်၏အဘနှင့်အစ်ကိုအစ်ကို တို့သည် သင့်ထံသို့ ရောက်လာလာကြသည်ဖြစ်၍၊
6 အဲဂုတ္တပြည်ပြည်သည် သင့်ရှေ့မှာရှေ့မှာ ရှိ၏။ သင်၏ အဘနှင့် သင်၏အစ်ကိုအစ်ကိုတို့ကို အကောင်းဆုံးသော အရပ် ဂေါရှင်ဂေါရှင်ပြည်ပြည်၌ နေနေရာချလော့။ သူတို့တွင် အစွမ်းသတ္တိ ရှိသောသူအချို့တို့ကို တွေ့လျှင် ငါ၏သိသိုးနွားအုပ်အရာ၌ ခန့်ထားလော့ဟု ယောသပ်အား မိန့်တော်မူ၏။
7 ယောသပ်သည်ယောသပ်သည် အဘယာကုပ်ယာကုပ်ကို သွင်း၍ ဖါရောမင်းရှေ့မှာရှေ့မှာ ထားသဖြင့်၊ ယာကုပ်ယာကုပ်သည် ဖါရောမင်း ကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေး၏။
8 ဖါရောမင်းက၊ သင်သည် အသက်အဘယ်မျှ လောက်ရှိပြီနည်းဟု ယာကုပ်ယာကုပ်အား မေးလျှင်၊
9 ကျွန်တော်သည် ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်၍ လွန် သော အသက်သည် အနှစ်တရာတရာသုံးဆယ်သုံးဆယ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်အသက်ရှင်သော နှစ်ပေါင်းနည်း၍ဆိုးပါ၏။ ဧည့်သည် အာဂန္တုဖြစ်သော ဘိုးဘေးတို့၏ အသက်တန်း ကို မမှီပါဟု လျှောက်ဆိုပြီးလျှင်၊
10 ဖါရောမင်းကို ကောင်းကြီးပေးကောင်းကြီးပေး၍ အထံတော်က ထွက်သွားလေ၏။
11 ဖါရောမင်းအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်း၊ ယောသပ်ယောသပ် သည် အဘနှင့် အစ်ကိုအစ်ကိုတို့ကကို နေနေရာချ၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌ အကကောင်းဆုံးသောအရပ် ရာမသကက်မြေမြေကကိုအပိုင်ပေးပေး၏။
12 အဘနှင့် အစ်ကိုအစ်ကိုများ၊ အဘ၏အိမ်အိမ်သားရှိသမျှ တို့ကို အနည်းအများအလိုက် ကျွေးမွေး၏။
13 အလွန်အစာအစာခေါင်းပါး၍ တပြည်ပြည်လုံးစားစရာ မရှိသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်နှင့် ခါနာန်ခါနာန်ပြည်ပြည်သည် အားလျော့လေ၏။
14 ပြည်ပြည်သားဝယ်သော စပါးအဘိုး၊ အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်၊ ခါနာန်ခါနာန်ပြည်ပြည်၌ တွေ့သမျှသော ငွေငွေကိုယောသပ်ယောသပ်စုသိမ်း၍ နန်းတော်သို့ သွင်းထားလေ၏။
15 အဲဂုတ္တုပြည်ပြည်၊ ခါနာန်ခါနာန်ပြည်ပြည်၌ ငွေငွေကုန်သောအခါ၊ အဲဂုတ္တုလူအပေါင်းတို့သည် ယောသပ်ယောသပ်ထံသို့လာလာ၍ စား စရာဘို့ ပေးသနားတော်မူပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ငွေငွေကုန်သော်လည်း ရှေ့တော်၌ အဘယ်ကြောင့် သေရပါအံ့နည်းဟု လျှောက်ကြသော်၊
16 ယောသပ်ယောသပ်က၊ ငွေငွေကုန်လျှင် တိရစ္ဆာန်များတိရစ္ဆာန်များကို ပေးပေးကြ။ တိရစ္ဆာန်အတွက် စပါးကိုပေးပေးမည်ဟုဆိုသည် အတိုင်း၊
17 သူတို့သည် တိရစ္ဆာန်တို့ကိုယူခဲ့၍၊ ယောသပ်ယောသပ် သည် မြင်းမြင်း၊ သိုးသိုး၊ နွားနွား၊ မြည်းမြည်းတို့အတွက် စပါးကိုပေးပေးသဖြင့် ထိုနှစ်တွင် တိရစ္ဆာန်ရှိသမျှတို့အတွက် ပြည်သားများကို ကျွေးမွေး၏။
18 ထိုနှစ်ကုန်ပြီးမှ ဒုတိယနှစ်တွင်လာလာကြလျှင်၊ ကျွန်တော်တို့ ငွေငွေကုန်ကြောင်းကို သခင်သခင်ရှေ့မှာရှေ့မှာ မထိမ်ဝှက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိရစ္ဆာန်များတိရစ္ဆာန်များကိုလည်း သခင်သခင် ရပါပြီ။ သခင်သခင်ရှေ့မှာရှေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နှင့် မြေမှတပါး အဘယ်အရာမျှ မကျန်ပါ။
19 ရှေ့တော်၌ အဘယ်ကြောင့်သေ၍ ပြည်တော် ပျက်ရပါအံ့နည်း။ အစာအစာကို ပေးပေး၍ကျွန်ကျွန်တော်တို့နှင့် ကျွန်ကျွန်တော်တို့မြေကို ဝယ်ပါ။ ကျွန်ကျွန်တော်တို့သည် မြေနှင့် တကွ ဖါရောဘုရင်၏ ကျွန်ကျွန်ခံပါမည်။ ကျွန်ကျွန်တော်တို့သည် မသေ၊ အသက်ရှင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ပြည်တော်သည် လူမဆိတ်ညံစေခြင်းငှါ၎င်း၊ မျိုးစေ့ကို ပေးပေးပါဟု လျှောက်ကြ သော်၊
20 ယောသပ်သည်ယောသပ်သည် အဲဂုတ္တုမြေမြေရှိသမျှကို ဖါရော မင်းမဘို့ဝယ်လေ၏။ အစာခေါင်းပါး၍ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့သည် မတတ်နိုင်သောကြောင့်၊ အသီးအသီးပိုင်သော မြေမြေအကွက်တို့ကို ရောင်းကြသဖြင့် မြေမြေသည် ဘဏ္ဍာတော် ဖြစ်လေ၏။
21 လူတို့ကိုကား၊ အဲဂုတ္တုပြည် တစွန်းမှသည် တစွန်းတိုင်အောင် မြို့မြို့တို့သို့ပြောင်းစေ၏။
22 ယဇ်ပုရောဟိတ်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ ပိုင်သောမြေကိုကားမဝယ်။ သူတို့သည် ဖါရောမင်းကျွေးမွေးသည်အတိုင်း ကျွေးမွေး သော အစာကိုစားရစားရကြ၏။ ထိုကြောင့် မိမိတို့မြေကို မရောင်းရကြ။
23 ယောသပ်ယောသပ်ကလည်း၊ သင်တို့နှင့် သင်တို့မြေကို ဖါရောမင်းဘို့ ယနေ့နေ့ငါဝယ်ပြီ။ မျိုးစေ့ကို ယူ၍ လယ်လုပ်ကြလော့။
24 အသီးအနှံကိုရသောအခါ၊ ငါးဘို့တွင်တဘို့ကို ဖါရောမင်းအား ဆက်ရကြမည်။ လေးလေးဘို့ကိုကား သင်တို့ ယူ၍ နောက်တဖန်မျိုးစေ့ကို ကြဲကြလော့။ သင်တို့စား၍ အိမ်အိမ်သားများ၊ သူငယ်များတို့ကို ကျွေးကြလော့ဟု ပြည်သားတို့အား ဆို၏။
25 သူတို့ကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ကျွန်တော်တို့ အသက်ကို ကယ်ကယ်ပါပြီ။ သနားသော စိတ်နှင့်ကြည့်ရှုတော် မူပါ။ ကျွန်ကျွန်တော်တို့သည် ဖာရောဘုရင်၏ဖာရောဘုရင်၏ကျွန်ကျွန်ခံရပါမည် ဟု လျှောက်ကြ၏။
26 ထိုကြောင့် ဖါရောမင်းမပိုင်သော ယဇ်ပုရော ဟိတ်တို့ မြေကိုထား၍၊ ဖါရောမင်းသည် ငါးဘို့တွင် တဘို့ကိုပိုင်တော်မူစေဟု ယနေ့နေ့တိုင်အောင် အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌တည်သော ဓမ္မသတ်ကို ယောသပ်ယောသပ်စီရင်၍ ထား သတည်း။
27 ဣသရေလ သားတို့သည်၊ အဲဂုတ္တုပြည်ပြည် ဂေါရှင်ဂေါရှင် အရပ်၌နေနေသဖြင့်၊ ဥစ္စာရတတ်၍ တိုးပွါးများပြားကြ၏။
28 ယာကုပ်ယာကုပ်သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌ ဆယ်ခုနစ်နှစ် အသက်ရှင်၍ အသက်နှစ်ပေါင်း တရာတရာလေးဆယ်လေးဆယ်ခုနစ် နှစ်ရှိသတည်း။
29 ဣသရေလသည် သေရသောအချိန်နီးနီးသော်၊ သားသားယောသပ်ယောသပ်ကို ခေါ်၍ ငါ့ကိုသနားလျှင် သင်၏ လက်လက်ကို ငါ့ပေါင်ပေါင်အောက်၌ ထားပါလော့။ ကရုဏာကရုဏာသစ္စာ နှင့်အညီ ငါ၌ပြပြုပါ။ အဲဂုတ္တုပြည်၌အဲဂုတ္တုပြည်၌ ငါ့ကိုမသင်္ဂြိုဟ်ပါနှင့်။
30 ငါသည်ဘိုးဘေးနှင့်အတူ အိပ်ချင်ပါ၏။ အဲဂုတ္တု ပြည်မှ ငါ့ကို ဆောင်သွား၍ သူတို့သင်္ချိုင်း၌ သင်္ဂြိုဟ် ရမည်ဟုဆို၏။ ယောသပ်ကလည်း၊ အဘဆိုသည် အတိုင်း အကျွန်ုပ်ပြုပါမည်ဟု ဝန်ခံလေ၏။
31 ငါ့အားကျိန်ဆိုကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြုပါဟု ဆိုပြန်လျှင်၊ ကျိန်ဆိုကျိန်ဆိုခြင်းကို ပြု၏။ ဣသရေလသည်လည်း ခုတင် ခေါင်းရင်းပေါ်မှာ ကိုးကွယ်လေ၏။
Arcana Coelestia 6059, 6060, 6061, 6069, 6070, 6071, 6088, ...6089, 6090, 6091, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6108, 6109, 6110, 6111, 6168
Arcana Coelestia 1463, 2838, 2916, 4286, 5973, 6062, 6063, ...6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100, 6106, 6107, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6171, 6226
217 - Joseph Part4of 4: Reunited in Goshen
200 - Famine
322 - A Way Forward, Part 1 of 7
329 - Selling Everything to Joseph
ကမ္ဘာ ဦး 14:19, 20, 21, 24:2, 25:7, 9, 28:22, 32:6, 41:30, 34, 36, 56, 57, 45:7, 10, 11, 18, 20, 46:3, 31, 33, 47:9, 28, 48:21, 50:5, 21, 24, 25
ထွက်မြောက်ရာ 1:11, 12:37
တောလည်ရာ 18:21, 33:3
တရားဟောရာကျမ်း 14:22, 26:12, 31:14, 16
ယောရှုသည် 2:14, 14:13, 23:14
၃ ဓမ္မရာဇဝင် 1:47, 2:1
၁ ရာဇဝင်ချုပ် 29:15
z ဇရ 7:24
ယောဘ 2:4, 14:1
ဟေဗြဲ 11:13, 21
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...
It’s pretty easy for most people to read the Bible and getasense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...
‘The land of Goshen,’ as in Genesis 46:28, signifies the innermost parts of the natural mind.
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face ofastorm of false thinking. Sometimes...
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers haveameaning...
In Revelation 19:16, 'the Lord’s thigh' signifies the Word regarding its divine good. 'The thigh and loins' signify conjugial love, and because this is the...
Joseph Welcomes His Family
Submission to the Lord's Plan
Překlad: Elliott (1983-1999) Potts (1965-1970) New Century Edition, Cooper (2008, 2013) original (1748-1753) Die Himmlischen Geheimnisse (pdf) Weevers vertaling (2012-2017) Le Boys des Guays traduction Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu (2018) Italian (2016) Tradução Nobre (1999) Svenska Översättning (2010) Heger překlad (2017) 中文翻译
Arcana Coelestia # 6069
6069. Verses 2-6 And from his brothers' party he took five men, and placed them before Pharaoh. And Pharaoh said to his brothers, What are your works? 1 And they said to Pharaoh, Shepherds of the flock are your servants, both we and our fathers. And they said to Pharaoh, We have come to sojourn in the land, for there is no pasture for the flock which belongs to your servants, for the famine is serious in the land of Canaan; and now let your servants, we beg you, dwell in the land of Goshen. And Pharaoh said to Joseph - he said, Your father and your brothers have come to you. The land of Egypt is before you; in the best of the land cause your father and your brothers to dwell; let them dwell in the land of Goshen. And if you know that there are among them men with energy, then set them as the chief men over the livestock belonging to me.
'And from his brothers' party he took five men' means some of the truths of the Church. 'And placed them before Pharaoh' means an introduction into factual knowledge. 'And Pharaoh said to his brothers' means perception regarding the truths of the Church within the natural. 'What are your works?' means regarding duties and useful services. 'And they said to Pharaoh, Shepherds of the flock are your servants' means that they lead to good. 'Both we and our fathers' means that this was so since the time of the ancients. 'And they said to Pharaoh' meansacontinuation of the perception. 'We have come to sojourn in the land' meansaseeking to live in factual knowledge. 'For there is no pasture for the flock which belongs to your servants' means that factual knowledge holding forms of the good of truth is wanting. 'For the famine is serious in the land of Canaan' means that there isalack of such forms in the Church. 'And now let your servants, we beg you, dwell in the land of Goshen' means so that they may live in the middle of them. 'And Pharaoh said to Joseph - he said' means perception in the natural where factual knowledge resides. 'Your father and your brothers have come to you' means regarding the influx of the internal celestial into spiritual good from the natural and into the truths of the Church there. 'The land of Egypt is before you means that factual knowledge in the natural mind is subject to the guidance of the internal celestial. 'In the best of the land cause your father and your brothers to dwell' means that they may live in the inmost part of it. 'Let them dwell in the land of Goshen' means where the middle is. 'And if you know that there are among them men with energy' means the more outstanding contents of doctrine. 'Then set them as the chief men over the livestock belonging to me' means that they are the first and foremost among known facts.
1. i.e. What is your occupation?